Wasaarada Arimaha Gudaha Kenya oo baareysa Sababta loo dilay s... | Universal Somali TV
Mas,uuliyiin ka socota wasaarada Arimaha gudha kenya ayaa la filayaa in todobaadka soo aadan ay gaaraan xadka ay wadaagaan ismaamulada Garissa iyo Isiolo oo ka tirsan gobolada waqooyi iyo gobalka bariga kenya.
Wasiirka wasaarada Arimaha gudaha Freid Matiangi iyo taliyaha guud ee ciidamada Police-ka Joseph Poinet ayaa hormuud u noqon doona mas,uuliyiinta tagaya halkaasi si ay u maareyaan xaalada cakiran iyo isku dhaca u dhaxeeya qowmiyadaha somalida iyo Borane-ta ee ku nool Madogashe iyo Garba Tulla.
Todobaadkii hore ayaa sadex ruux oo samali ah waxaa lagu dilay degaanka Ceeldheere ee degmada Lagdera oo xad la wadaga degmada Koonfureed ee Isiolo.
Mudanaha Laga soo doortay degmada Lagdera ee dowlad goboleedka Garissa Mahamed Hire ayaa ku eedeyay dhigiisa laga soo doortay koonfurta Isiolo Abdi Koropu Tepo kicin uu sameyay in ay u dhinteen dadkaasi.
Xildhibaankaan ayaa ugu baaqay xoola dhaqatada soomaaliyeed in ay ka baxaan isiolo isaga oo si gaar ah farta ugu fiiqay beesha degta degmada Lagdera.
Hadalada xanafta leh ee xildhibaankan ayaa waxaa loogu baaqay in ay wax ka qabtaan gudiga isdhexgalka wadajirka iyo sinaanta kenya ee loo yaqaan NCIC.
Hadii lagu helo danbigan ayaa xildhibaankan waxaa uu muteysan doonaa in la maxkameeyo.
Kan-xigaObama oo Jawaab Adag ka bixiyay dhali...
Kan-horeKumanaan ka mid ah shaqaalaha Amason ...
40,457,716 unique visits